Android ထုတ်ကုန်များ၏ ၁၂.၄% တွင်အချို့သော Lollipop မူကွဲရှိသည်
Android L ၏အကြိုပြသမှုကိုတင်ပြပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင် ၁ ပတ်အတွင်း Play Store သို့ဝင်သော Android ထုတ်ကုန်များ၏ ၁၂.၄% တွင် Lollipop ကိုတွေ့ရှိရသည်။
MediaTek သည် Helio P10 ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုပြသသည်
MediaTek သည်၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ MediaTek Helio P10 - ၈-core SoC ဖြစ်ပြီး 64-bit ဗိသုကာနှင့်ယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောက်ရှိမည်
Google I / O 2015, ဒီဟာငါ့နိဂုံးများ
Google I / O 2015 ၏အကျဉ်းချုပ်၊ ဂူးဂဲလ်တီထွင်သူကွန်ဖရင့်၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုနှင့်ဤစာစောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်
သုံးစွဲသူအား၎င်းတို့၏ Android ထုတ်ကုန်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများပေးရန် Google က "My Google Account" ကိုစတင်ခဲ့သည်
Nintendo ၏နောက်ထပ် console သည် Android အောက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်
Nintendo ၏နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်သည် Google ၏ Android လည်ပတ်မှုစနစ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အချိန်တန်ပြီ၊ OnePlus One သည်ရောင်းနေပြီ
OnePlusOne ကို ၀ ယ်ရန်အချိန်ကျပြီ၊
လက်လှုပ်ရှားမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အလွန်သေးငယ်သောရေဒါများပါရှိသောဂူးဂဲလ်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော Project Soli
Project Soli သည် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာနှင့်မထိတွေ့ဘဲလက်လှုပ်ရှားမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
အံ့သြစရာကောင်းသည့် Android Apps: Mooverang သည်သင်၏ဘဏ်စာရင်းအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Mooverang ကိုရိုးရှင်း။ မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုတည်းမှသင်၏ဘဏ်အကောင့်များအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းမှထိန်းချုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ASUS မှ ZenWatch 2, ZenFone Selfie နှင့် ZenPad တက်ဘလက်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
ASUS သည် ZenWatch 2, ZenFone Selfie နှင့် ZenPads သုံးမျိုးအပါအဝင် Android ထုတ်ကုန်သစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်။
စီမံကိန်းချိုင့်၊ Samsung ကခေါက်နိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
ဂူးဂဲလ် I / O 2015 သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့သည့်သတင်းများကြောင့်လူကြိုက်များသောကွန်ဖရင့်၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှု ...
Android M သည်အသံထိန်းချုပ်မှုပြproblemနာကို Google ကဖြေရှင်းသည်
Android M သည်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ပိုမိုထိရောက်သောအသံထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်ပြproblemsနာများအနက်မှတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်
Android M သည်ဘက်ထရီကိုချွေတာရန်အတွက်မှောင်မိုက်သောအကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းထားသည်
Google developer conference ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှု၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော Google I / O 2015 …
သင့်မှာကင်မရာ ၁၆ လုံးရှိပါသလား။ ကောင်းပြီ, Jump ဖြင့်သင်သည် virtual reality ဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်
ကျွန်တော်တို့ဟာ virtual reality ကို ဦး တည်တဲ့ ၃၆၀ ဒီဂရီဗီဒီယိုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ Jump ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်
Android M တွင် ၀ င်းဒိုး multi-mode ရှိသည်
Android M ၏အဓိကအသစ်အဆန်းများအနက်တစ်ခုမှာ multi-window mode ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်ယခုအချိန်သည်လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဤအရာများသည် Google I / O ၏ဒုတိယနေ့မှသတင်းများဖြစ်သည်
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဟာ Google developer တွေအတွက်ကွန်ဖရင့်ဖြစ်တဲ့ Google I / O ရဲ့ဒုတိယနေ့ကိုဗီဒီယိုထဲနှစ်ရက်အပြင်အနှစ်ချုပ်ပါ။
Ara I စီမံကိန်းကို Google I / O တွင်တင်ပြခဲ့သည်
Rafael Camargo သည်အေအက်ဖ်ပီသတင်းတွင် Proyecto Ara ၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုပြသခဲ့သည်။
Google Play တွင်တစ်မိသားစုလုံးအတွက်ကဏ္familyများနှင့်အကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည်
Google ကအရာရာတိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးဒီဟာက Google Play မှာမကြာခင်စတင်နိုင်မယ့်“ Designed for Families” အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Google Smart Lock သည်သင်၏စကားဝှက်များကို Chrome ရော Android အတွက်ပါဝင်ရောက်ပါလိမ့်မည်
Google Smart Lock သည်သင့်ကိုစကားဝှက်မထည့်ဘဲတတိယပါတီအက်ပ်တစ်ခုထဲသို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ သူကသူတို့အားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်။
Google I / O 2015 တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သမျှအရာအားလုံးအကျဉ်းချုပ်
Google, I / O 2015 သည် Android, Wear နှင့်အခြားအရာများဖြင့်တစ်နှစ်အတွက်ဂူဂဲလ်သတင်းများအားလုံးနှင့်အတူမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည်
Android M Preview ကိုယခု Nexus 5,6နှင့်9အတွက်ရရှိနိုင်သည်
Android M Preview ကိုယနေ့ခေတ်တွင်စက်ရုံပုံသဏ္asာန်အနေဖြင့် Nexus 5,6နှင့်9ပစ္စည်းများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်၏အဆိုအရအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်သောပစ္စည်းဒီဇိုင်း ၁၈ ခု
ပစ္စည်းဒီဇိုင်း ၁၈ ခုကို Google ကစတင်ပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းပုံစံကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်
Google CardBoard ကိုအသစ်ပြောင်း
Google CardBoards သည် Google I / O. ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှု၌ကြီးမားသောအံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကတ်ထူပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကိရိယာတစ်ခု ...
ဤအရာများသည် Chromecast မှသတင်းများဖြစ်သည်
Google သည် Google I / O ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုတွင် Chromecast အတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အကုန်တွင် Google သည်အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံများကို Google Maps တွင်အပြည့်အဝရယူနိုင်လိမ့်မည်
ဂူးဂဲလ်ကချိတ်ဆက်စရာမလိုပဲ Maps မြေပုံများကိုအပြည့်အဝ ၀ င်ရောက်မှုကိုကြေငြာလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုအပြည့်အဝဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်
Android M အတွက်သော့ခြောက်ခု
Android M preview ကိုယနေ့ Sundar Pichai မှထုတ်လွှင့်ပြီးသော့ချက်ခြောက်ခုနှင့်ဒီဗားရှင်းအသစ်၏အရေးအကြီးဆုံးအချက်များကိုစုစည်းထားသည်။
Google I / O 2015: ဒီနေ့ခေတ်မှာ Google Stick အသစ် ၂ ခု၊ အိတ်ဆောင် Chrome OS နဲ့ Chromecast2နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုပြသနိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Google I / O 2015 ၏ဖွင့်လှစ်သော Keynote တွင် Google Stick အသစ်နှစ်ခု၊ အထူးသဖြင့် Chromecast2နှင့် Chromebit ဟုလူသိများသော HDMI Stick တစ်ခုကိုတွေ့နိုင်သည်။
Google IO5နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက် ၅
အလွန်ကြီးစွာသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ရပ်, Google IO 2015 မတိုင်မီနာရီအနည်းငယ်, ငါအနာဂတ်သတင်းများနှင့်ပတ်သက်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်ပေး။
Google I / O 2015 ၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုညနေ ၆:၃၀ နာရီတွင်တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်သလဲ (စပိန်အချိန်)
Streaming ရှိဂူဂဲလ် I / O 2015 ၏ဖွင့်လှစ်သောသော့ချက်စာကိုသင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Yota က YotaPhone3နှင့် YotaPhone 2c ကိုအတည်ပြုသည်
Yota Devices သည်ဆိပ်ကမ်းအသစ်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ YotaPhone3နှင့် YotaPhone 2c တို့ဖြစ်သည်။
Android tablet များပေါ်တွင် Office နှင့် Skype ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းရန် Microsoft, LG, Sony နှင့်အခြားသောထုတ်လုပ်သူ ၁၈ ဦး နှင့်ပူးပေါင်းသည်
Word နှင့် Excel၊ Powerpoint, OneNote၊ Skydrive နှင့် Skype တို့ကို Android tablet များ၌ကြိုတင်ထည့်သွင်းရန် Microsoft နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်သောထုတ်လုပ်သူ ၁၈ ဦး
Android အတွက် Cortana ကို Microsoft ကကြေငြာခဲ့သည်
Microsoft က Android နှင့် iOS အတွက် Cortana ကိုကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဇွန်လနှောင်းပိုင်းတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ စကားပြောဖို့အများကြီးပေးထားသောအသံလက်ထောက်။
Sony Xperia Z3 + တွင်တရားဝင်: Snapdragon 810 ချစ်ပ်၊ ၅.၂″ ၁၀၈၀p မျက်နှာပြင်နှင့်ရေစိုခံနိုင်သည်
Xperia Z4 ကိုလွန်ခဲ့သောတစ်လက Japan တွင်တင်ခဲ့သည်။ ထိုနိုင်ငံတွင်ထိုနိုင်ငံ၏နာမည်နှင့် Xperia Z3 + ကိုနိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း
Google I / O 2015 တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်မျှော်နေသောအရာ
Google I / O 2015 သည် developer ညီလာခံဖြစ်ပြီး Android နှင့်အခြားဂူဂဲလ်ပလက်ဖောင်းများအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းများကိုထုတ်လွှင့်သည်
ယခုနှစ်တွင် Google သည် Nexus terminal အသစ် ၂ ခု၊ စမတ်ဖုန်းနှင့် Phablet အသစ်ကိုပြသလိမ့်မည်
Google သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Nexus terminal အသစ် ၂ ခုကိုပြင်ဆင်မည်ဟု အင်အားသုံး၍ ကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
Lenovo ၏နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Vibe S1 တွင်ကွေးသောမျက်နှာပြင်ပါရှိသည်
အသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးလာမယ့် Lenovo terminal, Vibe S1, ကွေးကောက်ဒီဇိုင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ရှိလိမ့်မည်ဟုငါတို့သိနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုထောင့်တနေရာမှာစောင့်ဆိုင်းနေသော Google Photos app အသစ်
Google ဓါတ်ပုံများသည် Google+ မှလုံးဝလွတ်လပ်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစက်၏ရုပ်ပုံများကိုစီမံနိုင်သည်
[APK] Dropbox သည် Material Design သို့အပြည့်အဝ update လုပ်သည်
Dropbox အသစ်၏ APK ကို interface အသစ်၊ navigation panel နှင့် FAB ခလုတ်ဖြင့် Material Design သို့သက်တမ်းတိုးပါ
သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာမှ ၂၀၁၅ ဒေသဆိုင်ရာနှင့်မြူနီစီပယ်ရွေးကောက်ပွဲများ၏ရလဒ်များကိုမည်သို့လိုက်နာရမည်နည်း။ (Android, iPhone နှင့် Windows Mobile)
စပိန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော ၂၀၁၅ ဒေသဆိုင်ရာနှင့်မြူနီစီပယ်ရွေးကောက်ပွဲများ၏ရလဒ်များကိုသိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်ပြပါမည်။
Photoshop Touch ကိုအစားထိုးမည့် Adobe image retouching အက်ပလီကေးရှင်းသစ်သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်
Adobe သည် Photoshop ၏ desktop version တွင်အလားတူခံစားမှုမျိုးကိုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များသို့ယူဆောင်လာလိုသည်
Samsung နှင့် Sherpa တို့က Sherpa Next ကို Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တွင်ထည့်သွင်းရန်သဘောတူညီချက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Samsung နှင့် Sherpa တို့သည် Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တွင် Sherpa Next ကိုကြိုတင်တပ်ဆင်ရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်
Oppo R7 နှင့် Oppo R7 Plus ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်
Oppo သည် Oppo R7 နှင့် Oppo R7 Plus တို့ကို၎င်းတို့၏တရားဝင်ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ထင်ရှားသောဆိပ်ကမ်းအသစ်နှစ်ခုကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Android ဖုန်းများအတွက် Preview Form တွင် Microsoft Word, Excel နှင့် PowerPoint ကိုယခုရနိုင်သည်
Microsoft Word, Excel နှင့် Powerpoint တို့၏ preview ကို Android ဖုန်းများရှိ beta ပရိုဂရမ်မှယခု download လုပ်နိုင်သည်
LG သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုပြသနိုင်သည်။ LG G Pro 2015 ဖြစ်လိမ့်မည်လား။
MixRadio, လူကြိုက်များသောဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုသည် Play Store တွင်ယခုရနိုင်သည်
MixRadio ကိုယခုလွှင့်ထုတ်လွှင့်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမှအကောင်းဆုံးဂီတကိုရယူရန် Play စတိုးမှရနိုင်သည်
Android Wear 5.1.1 ဖြန့်ကျက်မှုကိုစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေနဲ့အစပြုတယ်
Android Wear 5.1.1 သည်ဤ operating system ပါ ၀ င်သောတိုးတက်မှုများစွာပါသော smarwatch ပိုင်ရှင်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော update ဖြစ်သည်
Xiaomi သည် Mi Note Pro 20 အတွက် Helio X2 ကိုလောင်းမည်
Xiaomi သည် Mi Note Pro2နှင့်အစွမ်းထက်သည့် MediaTek Helio X20 ပရိုဆက်ဆာ၊ ၁၀-core သတ္တဝါ ၆၄-bit ဗိသုကာနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
LeTV One Pro သည်တစ်စက္ကန့်တွင်ရောင်းရန်ယူနစ် ၂၀၀,၀၀၀ ရောင်းခဲ့သည်
LeTV One Pro ၏ ၁၀၀ စက္ကန့်အတွင်း Flash စနစ် အသုံးပြု၍ ရောင်းချခဲ့သော LeTV One Pro ၏စီးရေ ၂၀၀,၀၀၀ ကိုဖြုန်းတီးပစ်ရန်စီမံခြင်းဖြင့် LeTV သည်လှုပ်ခတ်သွားသည်။
Sharp Crystal 2၊ ဘောင်မဲ့ mid-range terminal
Sharp သည် Crystal2အသစ်နှင့်အတူတိုက်ပွဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ ကိရိယာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ဘောင်များသာပါ ၀ င်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစား terminal တစ်ခု။
Facebook က WhatsApp သတင်းအချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီများသို့ရောင်းချရန်စီစဉ်နေသည်
Facebook သည် WhatsApp သုံးစွဲသူများ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုစိတ်ဝင်စားသောကုမ္ပဏီများသို့ကမ်းလှမ်းရန်အလေးအနက်စဉ်းစားနေသည်။
စာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန် Google ကစာလုံးကို Google Play Books မှ Literature အဖြစ်ပြောင်းသည်
Google Play Books က Literata လို့ခေါ်တဲ့အရင်းအမြစ်အသစ်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးဂူဂဲလ်ကိုယ်တိုင်ပြောသလိုရှည်လျားတဲ့စာဖတ်ခြင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်
LG က G4 Stylus နှင့် G4c ကိုစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးသည်
LG သည် G4 Stylus နှင့် G4c ထုတ်ကုန်သစ်နှစ်မျိုးထွက်ပေါ်လာမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ တစ်ခုက phablet ရဲ့ပုံစံနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ "mini" version ပါ။
LG G4 ကိုယခုအပတ်တွင်စတင်ရောင်းချမည်
LG သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ G4 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အခြားဒေသများသို့ရောက်ရှိရန်အဓိကဒေသများစွာ၌ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်သည်
Siswoo R9 Darkmoon, YotaPhone ပြိုင်ဆိုင်မှု
YotaPhone သည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသည့်၎င်း၏နှစ်ချက်ဖန်သားပြင်ကြောင့်အံ့အားသင့်သွားပြီးတစ်ခုမှာအီလက်ထရောနစ်မင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ယခု Siswoo R9 Darkmoon ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
Bluboo X550၊ ၅,၃၀၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်
Bluboo X550 သည်ကြီးမားသောဘက်ထရီပါ ၀ င်မည့်ပထမဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ၅,၃၀၀ mAh ဖြစ်သည်။
Nexus52015 ၏စျေးနှုန်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားစစ်ထုတ်ထားပါသည်
နောက်ဆုံးတွင် Nexus52015 ၏စျေးနှုန်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားသောလျောက်ပတ်သောစစ်ထုတ်ခြင်း
Play Music ဝဘ်စာမျက်နှာအတွက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်မှု
Moto E 2015 သည် Android 5.1 Lollipop ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
သုံးစွဲသူများစွာထံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော Moto E 5.1 အတွက် Android 2015 အတွက်သတင်းနှင့်အမှားပြင်ဆင်မှုများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားသည်
Yu Yuphoria, Indio terminal ကိုယူရို ၁၀၀ အောက်အတွက်
Micromax သည် Cyanogen နှင့်အတူယူရိုယူဖိုရီးယား (Euro Yuphoria) ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးယူရို ၁၀၀ အောက်အတွက်အိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။
[APK ကို Download လုပ်ပါ] Google I / O 2015 ၏တရားဝင်လျှောက်လွှာကိုရရှိနိုင်သည်
တရား ၀ င်ဂူဂဲလ် I / O 2015 အက်ပလီကေးရှင်းကိုယခုအခါ APK ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီးဖြစ်ရပ်များနှင့်အဓိကအချက်များအားလုံးနှင့်အတူသင်၏ Android စက်မှ update လုပ်နိုင်သည်။
Android 5.1 Lollipop ကို Galaxy S6 နှင့် S6 Edge အတွက်လာမည့်လတွင်လာမည်
ဇွန်လသည် Android 5.1 Lollipop update ကို Galaxy S6 နှင့် Galaxy S6 Edge သို့ရောက်ရှိရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S6 Active ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခု
Samsung ၏ Galaxy S6 Active သည်အကြမ်းခံမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုအားပေးသည့် terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်
MediaTek Helio X20 သည်ပထမ ဦး ဆုံး ၁၀-core ပရိုဆက်ဆာ
MediaTek က Helio X20 လို့ခေါ်တဲ့ပထမ ဦး ဆုံး ၁၀-core ပရိုဆက်ဆာကိုမိတ်ဆက်လိုက်သည်။ အနာဂတ်အလယ်အလတ်အကွာအဝေးဆိပ်ကမ်းများကိုရည်ရွယ်သည်။
အမြန်အားသွင်းစနစ်အကြောင်း LG ကမေ့နေသည် G4 က Quick Charge 2.0 လိုက်ဖက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းကြေငြာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင် Moto X (2013) အတွက် Android Lollipop ကိုစတင်အသုံးပြုမည်။ ဤကြီးစွာသောဖုန်းကိုအသုံးပြုသူများမျှော်လင့်ထားသည့်ဗားရှင်းတစ်ခု
Qualcomm သည် 818-core သားရဲ Snapdragon 10 ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသည်။
San Diego အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူသည် Snapdragon 818 ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ သူသည် Core ၁၀ ခုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ထင်ရှားလိမ့်မည်။
Semiconductor စက်ရုံသစ်တွင် Samsung ကဒေါ်လာ ၁၄.၂၆ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်
Samsung ကသူ့ရဲ့ Exynos range ကိုလောင်းချင်တယ်။ ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
Samsung Galaxy Note5မှာ 4K model ပါလိမ့်မယ်။ virtual reality ရှိပါသလား။
Samsung က VR နည်းပညာကိုအကြီးအကျယ်လောင်းချင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် 5K မျက်နှာပြင်ပါသည့် Samsung Galaxy Note4၏ဗားရှင်းကိုတင်ပြနိုင်သည်။
SEGA သည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း Android, iOS, Samsung နှင့် Amazon စတိုးများမှမိုဘိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းအမြောက်အမြားကိုရုပ်သိမ်းလိမ့်မည်
Nintendo သည်၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးစမတ်ဖုန်းကို ၂၀၁၅ အကုန်တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ထိုစက်များအတွက်ဖန်တီးထားသည့်ဗီဒီယိုဂိမ်း ၅ မျိုးကိုထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်
Motorola သည် Android 5.1 ကို Moto X ဒုတိယမျိုးဆက်အတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
Motorola သည် Android 5.1 ကိုဒုတိယမျိုးဆက် Moto X သို့ဖြန့်ချိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
Elephone P4000 ကို 4.800 mAh ဘက်ထရီဖြင့်မနက်ဖြန်တင်ပေးမည်
Elephone သည်ကြီးမားသောအင်္ဂါရပ်များပါသောကိရိယာများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖြန့်ချိသောတရုတ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Elephone P4000 ကိုမနက်ဖြန်တင်မယ်။
Oppo R7 ၏စျေးနှုန်းသည်ယူရို ၅၀၀ ဖြစ်သည်
Oppo R7 ၏စျေးနှုန်းသည်ယူရို ၅၀၀ ဖြစ်လိမ့်မည်။
Samsung Galaxy Note5ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသိချင်ရင်အင်တာနက်ပေါ်ကကောလဟာလတွေအားလုံးကိုစုဆောင်းချင်တယ်
I / O ပရိုဂရမ်တွင် 'Voice Access' မှတစ်ဆင့်အက်ပလီကေးရှင်းများအားထိန်းချုပ်မှုကို Google မျှော်လင့်သည်
Google I / O ပရိုဂရမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့် developer များအားသူတို့၏အက်ပ်များကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုထိန်းချုပ်ရန် "Voice Access" အကြောင်းပြောဆိုသည်
Yaap Money သည်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်
ယနေ့၊ Yaap Money တည်ရှိပြီးရှစ်လအကြာတွင်ထိုလျှောက်လွှာနံပါတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးဒီနှစ်အတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အဓိကသတင်းများကိုလည်းသင်ကြားပေးပါသည်။
Honor7Plus ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Huawei ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လာမည့်ရက်များအတွင်းအလယ်အလတ်မြင့်အဆင့် Phablet ဟုသတ်မှတ်ထားသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည့် Honor7Plus ကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်။
အံ့သြဖွယ် Android Apps: ParkRadar Today
AparcaRadar သည် Android အတွက်အခမဲ့ application ဖြစ်ပြီးစပိန်နိုင်ငံရှိမြို့ကြီးများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ရှိနေသောအခမဲ့ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများကိုသုံးစွဲသူများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပလီကေးရှင်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
WhatsApp သည် Google Drive နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုပျက်ပြားစေသည်
WhatsApp ကမမျှော်လင့်ဘဲရွေ့လျားနေသောအရာသည် cloud backup များကိုဖျက်သည်။
Xiaomi နှင့် Qualcomm တို့သည် Snapdragon 810 ၏မူကွဲအသစ်ကိုဒီဇိုင်းထုတ်သည်
Qualcomm ကသူ့ရဲ့ processor ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး Snapdragon 810 v2.1 လို့ခေါ်တဲ့မူကွဲအသစ်ဟာအရင် version တွေထက်အများကြီးပိုတည်ငြိမ်သည်။
NightWatch သည် Android Wear ရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီသွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ကိုစောင့်ကြည့်နေသောဆီးချိုရောဂါ application တစ်ခုဖြစ်သည်
developer တစ်ယောက်သည် Android Wear အတွက် application တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်ပြီးဆီးချိုရောဂါအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
ဖြစ်နိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား Moto X 2015 ကိုစစ်ထုတ်သည်။ ၅.၂″ QHD မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,2 နှင့် 808GB RAM
Motorola သည်သြဂုတ်လသို့မဟုတ်စက်တင်ဘာလတွင် QuadHD မျက်နှာပြင်၊ 2015GB RAM နှင့် Snapdragon4ဖြင့် 808 Moto X ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်နေ
Xiaomi သည် Mi Note Pro ကိုတရုတ်ပြည်တွင် QHD မျက်နှာပြင်နှင့် 4GB RAM ဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Xiaomi Mi Note Pro ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး QHD မျက်နှာပြင် resolution နှင့် Snapdragon 810 ချစ်ပ်၏အပူချိန်ပြproblemsနာများအတွက်အဖြေတစ်ခုပါရှိသည်။
Wiko အဝေးပြေးကြယ်ပွင့်၊ ၅″ လက်မ၊ €5အတွက် 4G
Wiko ၏အထင်ကရ terminal ဖြစ်သောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစတားကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကြိုတင်ယူရို ၂၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်။
Elife E8, ၆ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင် 6K resolution နှင့်2GB RAM ပါရှိသည်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် Elion E8 Gionee မှလာမည့် terminal ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်။ ၎င်းတွင် 6K မျက်နှာပြင်ပါရှိပြီး 2K resolution နှင့်3GB RAM ပါရှိသည်
Android Lollipop သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ application များကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်
Android Lollipop ဗားရှင်းဖြင့်ဂူဂဲလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်၊ ၎င်းသည်အက်ပ်များအတွင်းထပ်တူပြုခြင်းကိုသုံးရန်နှင့်ထိုအချက်အလက်များ၏အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်
Third-party apps များ Google Now တွင် 'Ok Google' ဖြင့်ရောက်ရှိမည်
Google Now မှာ third-party app များအတွက် voice command နှင့်စတင်စမ်းသပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် 'Ok Google, Shazam this song' ကိုသုံးနိုင်သည်။
Android 5.1.1 Nexus7WiFi 2012/2013 နှင့် Nexus 10 အတွက်စက်ရုံဓာတ်ပုံများကိုရရှိနိုင်သည်
Android ဗားရှင်း ၅.၁.၁ ကို Nexus 5.1.1 Wifi 7/2012 နှင့် Nexus 2013. တို့အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ။
နံပါတ် ၁ S1i၊ Galaxy S6 ၏တရုတ်ကိုယ်ပွား
နံပါတ် ၁ S1i သည် Galaxy S6 ၏တရုတ်ကိုယ်ပွားဖြစ်သည်။ ပြင်ပတွင်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသည့်ပုံသဏ္specificationsာန်နှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။
လျှို့ဝှက် anonymity app သည်တံခါးများကိုပိတ်ထားသည်
Tag Heuer ၏ Android Wear စမတ်နာရီသည်နိုဝင်ဘာလတွင်အရှိန်မြှင့်လာသည်
Tag Heuer တွင်အရာရာတိုင်းအဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနို ၀ င်ဘာလတွင် Android Wear အောက်ရှိအဆင့်မြင့်ပြီးပြည့်စုံသောစမတ်နာရီကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်
Fonkraft, ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့် modular စမတ်ဖုန်း
Project Ara ကိုစောင့်နေစဉ်ကုမ္ပဏီများသည် Fonkraft ကဲ့သို့သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် modular ဖုန်းများပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။
Mlais MX,2GB RAM နှင့် ၄,၈၀၀ mAh ဘက်ထရီပါသည့်တရုတ်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး
Mlais သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းလောကသို့ ၀ င်ရောက်လိုသည့်အသေးစားကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် Mlais MX terminal အသစ်တင်လိုက်သည်။
ASUS သည် Snapdragon ကိုနောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များတွင်လောင်းမည်ဟုဆိုခဲ့သည်
လက်ရှိ ASUS ၏စီအီးအို၏အဆိုအရတရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည် Intel ၏အစား Snapdragon ပရိုဆက်ဆာများကိုလောင်းမည်ဟုဆိုသည်။
၀ င်းဒိုး ၁၀ မှ Android အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်အထောက်အပံ့ကို Microsoft ကကြေငြာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်
အကယ်၍ သင့်တွင် ၀ င်းဒိုး ၁၀ နှင့်ကွန်ပျူတာရှိပါကယခုအပတ်တွင် Microsoft မှပေးမည့်သတင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လျှင် Android အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးရှိနိုင်သည်
Philips ၏တီဗီ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် Android TV ကိုပေါင်းစပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်
ပထမဆုံးက Nexus Player ပါ။ အခုတော့ Philips က Android TV ကိုတီဗီမှာကြည့်လို့ရပြီ။
WhatsApp ကို vs Messenger ကို: အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးအဘယ်သူသည်အနိုင်ရလိမ့်မည်နည်း
Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် application များသို့မဟုတ် WhatsApp vs Messenger သို့အသံခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဘယ်သူ့စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်သလဲ
ဒီဗီဒီယိုနဲ့ Android Wear မှာကိုယ်ဟန်အမူအရာဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ Google ကသင်ပေးတယ်
Android Wear တွင်အမူအယာများကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်ကြားရန်ဂူဂဲလ်သည်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူသည် notifications များအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်
ဒါက LG G4 box ပါ
နာရီအနည်းငယ်အတွင်း LG G4 အသစ်တွင်ပါ ၀ င်မည့် box ကိုသတ်မှတ်ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ဖုန်းကိုစစ်ထုတ်ထားသည်။
2K မျက်နှာပြင်ပါသည့်လာမည့် Elephone အသစ်ကိုပြန်ဆိုနိုင်သည်
လာမည့် Elephone ထုတ်ကုန်အသစ်များသည်ပေါက်ကြားနေကြသည်။ 2K display ပါ ၀ င်ပြီး Android နှင့် Windows 10 ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Hugo Barra သည်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် Xiaomi Mi 4i ကိုဖြိုဖျက်သည်
Xiaomi ၏ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Hugo Barra သည်လက်အိတ်ပေါ်တွင် တင်၍ Xiaomi Mi 4i ကိုဖြုတ်ရန်ဝက်အူလှည့်ယာဉ်ကိုယူသည်။
Samsung Galaxy S6 Edge ဖျားနာမှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် Samsung စက်ရုံသစ်
Samsung Galaxy S6 Edge ၏အဖျားက Samsung သည်ယခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက်စက်ရုံသစ်တခုကိုဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်နေသည်။
၎င်းသည် Xperia Z4 ကိုကမ္ဘာအနှံ့တွင်အစားထိုးမည့် Sony ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သည်။
Android developer များ၏စပိန်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသုံးရက် Droidcon 2015
Droidcon 2015 သည်ယနေ့ခေတ်မက်ဒရစ်တွင်ဖြစ်ပွားနေသောစပိန် Android အသိုင်းအဝိုင်းကိုတီထွင်သူများအတွက်အရေးပါသောချိန်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်
Elephone သည် Android နှင့် Windows 10 ပါသောဖုန်းကိုပြင်ဆင်သည်
Elephone သည်နိုင်ငံတကာတွင်ပိုမိုဂုဏ်သိက္ခာရှိလာသည်။ အာရှထုတ်လုပ်သူသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဖြေရှင်းနည်းများကိုပိုမိုပေးသည်။
Lenovo K8 သည်4GB RAM နှင့် 4000 mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်
8G RAM နှင့်4mAh ပါဝင်သည့် Lenovo K4000 သည်ဒေါ်လာ ၂၉၀ ဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာများဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှသိနိုင်မည်လားဆိုသည်ကိုမသိရှိရသေးပါ။
ARM သည် 10nm ပရိုဆက်ဆာများကိုပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်
ARM သည် 10nm ပရိုဆက်ဆာများတည်ဆောက်ရန်စဉ်းစားနေသည်။ သူတို့၏ပေါက်ကြားနေသောလမ်းပြမြေပုံတွင် 10nm transistor များပါ ၀ င်သော SoCs အသစ်ဖြစ်သော Ares နှင့် Prometheus နှစ်ခုကိုပြသထားသည်။
Oppo R7 မှာလက်ဗွေဖတ်တဲ့သူရှိနိုင်တယ်
ယနေ့တွင် Oppo R7 ၏ပြန်ဆိုမှုများသည်သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော terminal တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည့် fingerprint sensor အပြင်အခြားယိုစိမ့်မှုရှိသည်။
Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့သည် Samsung မျှော်မှန်းထားသလောက်ရောင်းချခြင်းမရှိပါ
Samsung ဆိပ်ကမ်းအသစ်များဖြစ်သော Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့ကိုကိုရီးယားကုမ္ပဏီအရောင်းခန့်မှန်းချက်များအရကိုရီးယားတွင်ရောင်းချနေသည်။
Intel / x86 တက်ဘလက်များအတွက် Microsoft Office Preview ရနိုင်သည်
Microsoft Office Preview သည် Intel ၏ x86 architecture နှင့်အတူတက်ဘလက်များအတွက်အထောက်အပံ့ပေးထားသည်။
ZTE ၏အဆိုအရ Honor X2 နှင့် P8 နှစ်မျိုးလုံးသည်အာရှထုတ်လုပ်သူမှပိုင်ဆိုင်သောကင်မရာနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောမူပိုင်ခွင့်များစွာကိုချိုးဖောက်သည်။
ဒါက Google 6.0 Muffin version အသစ်နဲ့ငါတို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာလား။
Vladislav Vitula ကဒီဗီဒီယိုမှာ Android 6.0 Muffin မှာရှိမယ့်သဘောတရားသစ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဝံ့ဝံ့သည်။
LG G Stylo ကို ၅.၇ လက်မအရွယ် Snapdragon 5,7 နှင့် Lollipop ကြေငြာခဲ့သည်
LG က ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,7 နှင့် Android 410 Lollipop ပါသော G Stylo ဖုန်းအသစ်အကြောင်းကြေငြာလိုက်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Nokia သည်တယ်လီဖုန်းဈေးကွက်သို့ပြန်လာမည်
Sony Xperia Z4 Compact နှင့် Z4 Ultra ထွက်ပေါ်လာတော့သည်
POSTEL Indonesia ၏သွင်းကုန်ပေါ်တယ်ဒေတာဘေ့စ်မှတဆင့် Sony Xperia Z4 Compact နှင့် Sony Xperia Z4 Ultra ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Oppo R7, frames မရှိဘဲ terminal ကို၊ ဗွီဒီယိုတွင်တွေ့ရသည်
Oppo R7 ဗွီဒီယိုများသည်ဘေးထွက်ဘောင်မပါဘဲဤမိုဘိုင်းဖုန်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသနေသည်။
နောက်ထပ်ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည့် Elephone၊ 4GB RAM နှင့်ပရီမီယံပြီးဆုံးသည်
Elephone သည်မကြာသေးမီကပြောဆိုရန်ပိုမိုပေးသောအာရှထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခုတော့ Intel က Intel SoC နဲ့စက်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေပြီ
၎င်းသည် ASUS ZenFone4၏2GB RAM သည်မည်မျှအလုပ်လုပ်သည်
ASUS ZenFone2၏ဗွီဒီယိုတစ်ခုသည်၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာနှင့်4GB RAM မှတ်ဉာဏ်တို့ကြောင့် terminal ၏အလားအလာကောင်းများကိုပြသသည်။
Energy Earphones BT Sport, နားကြပ်ကိုအားကစားလုပ်ရန်နားကြပ်
အားကစားလုပ်နေစဉ်အတွင်းသီချင်းနားထောင်ရန်သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက်နားကြပ်စွမ်းအင် Earphones BT Sport ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
သူငယ်ချင်းနှစ် ဦး သည် Android နှင့် iOS ကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ထိုးနှက်သတ်ဖြတ်ကြသည်
လက်ခံရန်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သော်လည်းသူငယ်ချင်းများနှင့်အခန်းဖော်များက Android နှင့် iOS ကိုကာကွယ်သည့်အတွက်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြန်အလှန်ထိုးနှက်လိုက်ကြသည်။
LG သည် G4 ကင်မရာ၏သီလကို teaser ဗီဒီယိုတွင်ပြသသည်
teaser ဗီဒီယိုအသစ်တွင် LG သည်အသုံးပြုသူအတွက် G4 ၏ကင်မရာအင်္ဂါရပ်များစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပြသခဲ့သည်
အမှားအယွင်းများစွာကို Nexus72013 တက်ဘလက်များတွင်တွေ့ရသည်
သုံးစွဲသူများပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှ Nexus72013 ကဲ့သို့သောတက်ဘလက်တစ်ခုတွင်ကြီးမားသောပြproblemsနာများရှိနေသည်
Portañaသည် Android ရှိ Microsoft ၏ Cortana ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်
အီတလီဟက်ကာအုပ်စုတစ်စုသည် Cortana ဆိပ်ကမ်းကို Android တွင်Portañaဟုခေါ်သည်။ အားလုံးအင်္ဂါရပ်များရှိသည်နှင့်အီတလီပြောတတ်မဟုတ်ပါဘူး
Sony က Xperia Z4: ၅.၂ လက်မ FHD မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 5,2, 810GB RAM နှင့် 3MP ကင်မရာကိုပြသခဲ့သည်။
Full HD မျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Sony Xperia Z4 သည်နောက်ထပ်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကြာရှည်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်
Honor 3C ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊
ယနေ့တွင်သင့်အားယူရို ၁၅၀ မပြည့်သောအလယ်အလတ်တန်းစား Honor 3C နှင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူအတွက်မဆိုလုံလောက်သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုယူလာပါမည်။
Oppo R7 ကိုဗီဒီယိုတွင်တွေ့နိုင်သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Oppo ကဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာဘေးဘောင်မရှိဘဲလက်ကိုင်ဖုန်းတလုံးရှိတယ်၊ နာမည်က Oppo R7 ဖြစ်တယ်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် URLs များပြသပုံကိုဂူဂဲလ်မှပြောင်းလဲသည်
ဂူးဂဲလ်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှမိုဘိုင်းပစ္စည်းမှပြုလုပ်သည့်အခါပေါ်လာသည့် URL အပြောင်းအလဲကို paste လုပ်သည်
CyanogenMod သည်မိုက်ခရိုဆော့နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းနေပြီး CyanogenMod က၎င်းသည်၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းများကိုကြို။ တင်မထားကြောင်းအတည်ပြုသည်
CyanogenMod သည် Microsoft နှင့်အတူအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ CyanogenMod က၎င်း၏ ROM များတွင် Microsoft ၏အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ကောလာဟလအသစ်များအရဆိုလျှင် Sony Xperia Z4 သည်ဖုန်း၏ပါဝါခလုတ်တွင်လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာကိုထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်
“ Find My Phone” သည်စပိန်တွင်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်သင်၏ Android ပျောက်ဆုံးသောမိုဘိုင်းကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း
သင်၏ပျောက်သော Android မိုဘိုင်းကို Chrome မှရှာဖွေရန်စိတ်ကူးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်းအမှန်တကယ်မှာ Find My Phone သည်အနည်းဆုံးစပိန်တွင်အလုပ်မလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Huawei သည် P8max ကို ၆.၈ လက်မဖန်သားပြင်နှင့်အလွန်ပါးလွှာသော bezels ဖြင့်ထုတ်လွှတ်သည်
Huawei P8Max သည် P8 အသစ်၏“ အဟောင်း” ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ထင်ရှားသည်။
Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့် Huawei ဆိပ်ကမ်းများ၏တရားဝင်စာရင်း
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့် Huawei ၏တရားဝင်စာရင်းရှိပြီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Android ဗားရှင်းအသစ်အတွက်တရား ၀ င်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုအနိုင်ရခဲ့လျှင်သင်သိလိုလျှင်ဤစာကိုဖတ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
Nexus 5.1, Nexus47 နှင့် Nexus 20137LTE Android 2013 စက်ရုံပုံရိပ်များရရှိနိုင်သည်
Android 5.1 စက်ရုံ၏ပုံရိပ်များကို Nexus 4, Nexus72013 နှင့် Nexus72013 LTE များအတွက်ရရှိနိုင်သည်
Android စပ်စုသောကမ္ဘာ၊ ယနေ့ Selfie ဖိနပ်သည် selfie ချောင်းသို့နှုတ်ဆက်သည်
Selfies အတွက်ဖိနပ်သည်ယူအက်စ်မှတောက်ပသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီခေတ်မီလာနေသောလူကြိုက်များပြီးအောင်မြင်သော Selfie Stick ကိုအငြိမ်းစားယူရန်ရည်ရွယ်သည်။
Honor 4X ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်ယူရို ၂၀၀ ဖြင့်ရောင်းချသည်
Honor 4X သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Android 5.1 Lollipop update တွင်ပြနာများရှိနေသေးသည်
Android 5.1 Lollipop တွင်ပြသနာများဆက်လက်ရှိနေပြီး Nexus7၏အုတ်ခဲများကအချို့သော Nexus5တွင် Google ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းပြတ်တောက်သွားသည်
Cyanogen OS 12 ကို OnePlus One အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ [ZIP ဒေါင်းလုပ်]
သင်၏ OnePlus One တွင် Cyanogen OS 12 update ZIP ကို ​​Download လုပ်ပါ။ သင်၏ Android ဖုန်းတွင် Lollipop ၏ကောင်းကျိုးများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရလိမ့်မည်။
လွယ်ကူသောကိရိယာအချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Chrome တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားကိုအတုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာကိုပြုပြင်ရန်အတွက်ကိုသြဒီနိတ်ကိုသာပြောင်းလဲရမည်။
Sony သည် Xperia Z1, Z1 Compact နှင့် Z Ultra ကို Android 5.0.2 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
Android version 5.0.2 Lollipop သည် Sony Xperia Z1, Z1 Compact နှင့် Z Ultra တို့ကို ယနေ့မှစ၍ လာရောက်မည်ဖြစ်သည်
ခေါ်ဆိုမှုများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဘက်ထရီအခြေအနေများအကြောင်းကြားရန်သင့်ကင်မရာ၏ LED flash ကိုဖွင့်ပါ
ကင်မရာ flash ကိုခေါ်ဆိုမှုများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဘက်ထရီအခြေအနေများအကြောင်းကြားရန်အက်ပ်ဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်
ယူရို ၆၀၀ စမတ်ဖုန်းကိုတကယ်ဝယ်သင့်သလား။
စမတ်ဖုန်းတစ်ခုအတွက်ယူရို ၆၀၀ သုံးစွဲသင့်ပါသလား။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးအဆင့်မြင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများကိုပြသသည်
Tesla Model S နှင့်အတူ Samsung Galaxy S6 သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စမ်းသပ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
အသစ်သော Galaxy S6 ကိုလာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း Tesla Model S မှအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကဲ့သို့သောခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုများတွင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်
Oppo R7 Galaxy S6 Edge ၏မျက်နှာပြင်နှင့်အတူမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ
Oppo သည်ယခုနှစ်တွင်အပြင်းထန်ဆုံးသောတရုတ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ terminal အသစ် Oppo R7 တွင်ကွေးသောမျက်နှာပြင်ရှိလိမ့်မည်
ယူရို ၂၅၀ မပြည့်သော RAM3GB ပါရှိသည့် Elephone Pioneer
Elephone သည်၎င်း၏လောင်းကြေးအသစ်ဖြစ်သော Elephone Piooner၊ လက်ဗွေဆင်ဆာ၊3GB RAM နှင့်ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သည့်ဈေးနှုန်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။
Chrome crash သည် browser ကိုချိတ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည်
ဒီပြugနာဟာ Chrome ဗားရှင်း ၄၁ နဲ့ operating systems အားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိတယ်။ သတင်းကောင်းကတော့ဗားရှင်း ၄၂ ကပြtheနာကိုဖြေရှင်းပေးတယ်။
Android Lollipop 5.0.2 ကို LG G Pad 10.1 အတွက်ရရှိပြီဖြစ်ပြီး Androidsis တွင် OTA မှတဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်မည်မျှရိုးရှင်းကြောင်းပြသသည်။
အခြေအနေအားလုံးတွင်ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေမည့် HTC One M9 သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုရောက်ရှိခြင်းကို HTC America ကအတည်ပြုသည်
Doogee Ibiza F2 ကို 64-bit QuadCore ဒေါ်လာ ၁၂၉.၉၉ ဖြင့်သာပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဤတွင်သင့်အား 2-bit QuadCore ပရိုဆက်ဆာနှင့် RRP ၏ ၁၂၅ ယူရိုသာပါသောတရုတ်ရင်းမြစ်ကုမ္ပဏီ၏ terminal အသစ်ဖြစ်သော Doogee Ibiza F64 ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုသင်ဒီမှာထားရှိပါသည်။
Facebook သည် Messenger ၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုလွှင့်တင်ခဲ့သည်
သင့်ကွန်ပျူတာ၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှစကားပြောဆိုမှုများကိုစတင်ရန် Facebook သည် Messenger ၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုစတင်သည်
၀ က်ဘ်ဗားရှင်းမှမကြာမီ Android တွင်တွစ်တာမှမှတ်ချက်များပိုမိုပေးပို့နိုင်သည်
ဂူဂယ်လ် + ပုံပြင်များသည်ဂူဂဲလ် Now တွင်စတင်ပေါ်လာသည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဂူးဂဲလ်သည်၎င်း၏လူမှုကွန်ယက်ဂူဂယ်လ် + ၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏တင်ထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများနှင့်အတူခရီးသွားဂျာနယ်တစ်ခုဖန်တီးမည်။
Android အတွက် Chrome သည်မျက်နှာပြင်အပြည့်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်
Android အတွက် Google Chrome browser ၏နောက်ထပ် update တွင် application အတွင်းရှိအမျိုးမျိုးသောအတွင်းပိုင်းအမှားများကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်။
OnePlus သည် DR-1၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုယူရို ၁၉.၉၉ ဖြင့်ပေးသည်
Oneplus သည်ဒရုန်း ၁ ခုကိုယူဆောင်ပြီးယူရို ၁၉.၉၉ ကျသင့်ပြီးအကွာအဝေး ၅ မိနစ်မှ ၈ မိနစ်အထိမောင်းနှင်နိုင်သည်။
Huawei ၏ ၂၀၁၄ ဘဏ္financialာရေးရလဒ် - ၄.၂ ဘီလီယံအမြတ်
Huawei သည်ကုမ္ပဏီ၏ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုပြသသည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ၀ င်ငွေအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်
Nura Orange ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲ
Nura Orange ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများမှာအဘယ်နည်း။ ဒီဆောင်းပါးမှာ Nura Orange ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံးကိုငါတို့ပြသသွားမယ်
Asus Zenfone2ကိုဥရောပသို့သွားရန်
Asus Zenfone2အမျိုးအစားအားလုံးကိုဥရောပသို့ ဦး တည်သည်။ ဆိပ်ကမ်းများကိုပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံအများစုသို့ ၀ ယ်နိုင်သည်။
သင်၏ဂူဂယ်လ် + ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Google Drive တွင်တွေ့ရမည်
ဂူဂယ်လ်ဒရိုက်သည်ဂူဂဲလ် + ဓာတ်ပုံများရှိဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုအားလုံးကိုစီမံရန်သင့်တော်သောနေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုတစ်ခု
OnePlus One အတွက်အောက်စီဂျင် OS နှောင့်နှေးနေသည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီကမတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိမည့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ROM, Oxygen OS သည်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်နောက်ကျသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Piston 3.0, Xiaomi နားကြပ်အသစ်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Xiaomi က ၄ င်း၏နားကြပ်အသစ်များဖြစ်သော Piston 3.0 နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောနားကြပ်များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်တင်ဆက်ခဲ့သည်။
ဒါက Qualcomm Quick Charge 2.0 စနစ်အလုပ်လုပ်ပုံပါ
Qualcomm မှပရိုဆက်ဆာထုတ်လုပ်သူ၏ Quick Charge 2.0 နည်းပညာလည်ပတ်မှုကိုပြသသောဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်
ဘောင်မပါတဲ့မိုဘိုင်းလား။ Oppo ပြီးသားအဆင်သင့်ရှိပါတယ်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Oppo ကမျက်နှာပြင်မှာဘေးဘောင်မရှိဘဲလက်ကိုင်ဖုန်းတလုံးကိုဖွင့်မယ်။
Layout, Instagram ပေါ်မှာအသစ်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံ collages
Instagram collage ဖန်တီးရန်အတွက် application အသစ်ကိုတင်လိုက်သည်။ Layout ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်။
Snapdragon 815 ချစ်ပ်တွင် Snapdragon 810 ၏အပူချိန်ပြissuesနာမရှိပါ
Qualcomm ၏ Snapdragon 810 ချစ်ပ်အပူချိန်နှင့်ဆက်နွှယ်သောပြနာများအပြီးတွင် 815 အသစ်သည်သူတို့အတွက်မခံစားရပါ
ဘာစီလိုနာရီးရဲလ်မက်ဒရစ် 2015 အခမဲ့။ (ကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းများစွာ)
ဒီနေ့ဘာစီလိုနာရီးယဲမက်ဒရစ် ၂၀၁၅ အကြားကစားနည်းကို Android terminal, Windows Phone, iOS သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများမှအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပုံကိုယနေ့ရှင်းပြသည်။
ဂူဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများ ၇.၀ SDK ကိုနေရာဒေသများ၊ နီးကပ်သောဆက်သွယ်မှုများနှင့်အခြားအရာများအတွက် APIs အသစ်များဖြင့် developer များရရှိနိုင်ပါသည်
ဤ SDK ကိုရရှိနိုင်ပါက developer များသည် APIs အသစ်များကိုပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးဥပမာအားဖြင့်ကိရိယာတစ်ခုအားဂိမ်းထိန်းချုပ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်
Android Auto အက်ပလီကေးရှင်းကို Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည်
Android Auto app ကို Play Store တွင်ရနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Android ကိုကားများသို့ပထမဆုံးရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်
TAG Heuer မှာ Android Wear နဲ့စမတ်နာရီလည်းရှိမယ်
ဆွစ်ထုတ်လုပ်သူ TAG Heuer သည်ဆောင်း ဦး မှစ၍ စမတ်နာရီများ၌ကမ္ဘာသို့ ၀ င်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး Android Wear ဖြင့်ပထမဆုံးနာရီကိုမိတ်ဆက်မည်။
Google Chrome မှာစာဖတ်ခြင်းစနစ်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
[APK] Youtube ကို 4K video search filter အသစ်နှင့်အတူ
Google က Youtube အတွက် update အသစ်တစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဒီအသစ်ပြောင်းခြင်း၏အဓိကအရာသည် 4k video search filter အသစ်ဖြစ်သည်။
Android6Lollipop ကိုအခြေခံသည့် Lenovo ၏ဗားရှင်းသစ် Vibe UI 5.0
Lenovo က Android 5.0 ကိုအခြေခံထားတဲ့ Vibe UI interface ဗားရှင်းအသစ်ကိုပြသမယ်လို့ကြေငြာခဲ့တယ်။ Vibe Z3 Pro ကိုလည်းဒီပွဲမှာပြသနိုင်မယ်။
Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge သည်ရွှေ terminal ဖြစ်သည်
အဆင့်မြင့် Android စမတ်ဖုန်းများကိုဇိမ်ခံပစ္စည်းပေးသောကျွမ်းကျင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် Galaxy S6 နှင့် Galaxy S6 Edge တို့ကိုရွှေဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
Marina ဂီတဖွင့်စက်၊ အခြားကောင်းသောကောင်းသောတေးဂီတဖွင့်စက်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုများစွာပါ ၀ င်သည်
ဒီ Android အတွက် Marina Music Player လို့ခေါ်တဲ့တေးဂီတဖွင့်စက်သည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြပါမည်။